I-GPS008W - I-OMG GPS Tracker Watch yabantwana - Izisombululo ze-OMG
I-GPS008W-OMG GPS Tracker Bukela abantwana
I-OMG 2.0MP yeKhamera yoMntwana we-GPS Tracker Bukela i-LBS +GPS+AGPS+WIFI yokubeka i-Smart Kids Watch
* I $ 98 (Usu $ 168)
* Whatsapp +65 8333 4466 ukuze Order!!
* Ukuhanjiswa kweMini enye (uodolo namhlanje kwaye ufumane into yakho namhlanje) - S$12
Iwotshi ye-GPS tracker yabantwana yenzelwe ukunika abazali okanye abakhathaleli uxolo lwengqondo malunga nokuba uphi umntwana. Akusoloko kulula ukugcina amehlo omabini kulutsha olusebenzayo, kwaye ukulandelela iGPS yeyona ndlela ilandelayo yokugcina umkhondo wabo kunye nokuqinisekisa ukhuseleko lwabo.
Ukongeza kwindawo yokulandelela, i-OMGGPS08W GPS Tracker Watch yabantwana inikezela ngobuninzi beempawu, kubandakanywa ukufowunelwa kwendlela enye kunye neyombini kunye nokukwazi ukuseta imimandla ye-geofenced ekwazisayo xa umntwana wakho eshiye indawo ekhethiweyo. Sijonga ukuba zeziphi izixhobo ezihamba ngaphaya kweziseko kunye nendlela ezo mpawu zaphunyezwa ngayo.
I-GPS, i-GPRS, i-LBS, i-WIFI, indawo yokujonga inzwa.
Inkxaso yefowuni yexakeka.
Inkxaso yokujonga iinombolo.
Abahlobo manani abantwana bangenza unxibelelwano.
Iwashi ye-alamu ingasetwa yi-APP kwaye i-alamu iya kuthunyelwa ukuba ijonge ngexesha elimisiweyo.
Umgama okhuselekileyo, xa abantwana bengaphaya komgama okhuselekileyo obekwe ngaphambili, i-APP yefowuni yeselula iya kufumana i-alamu.
Ukulandelwa kwangempela kwexesha, ukulandelela ngexesha, ukudlala imbali.
Iindlela ezimbini zokunxibelelana.
Inkxaso yeMephu yeGoogle.
Akukho mrhumo wenyanga (ukuxhasa ukuhlawulwa kwangaphambili kunye nokuhlawulwa kweposi).
I-3G yaBantwana ye-GPS Tracker Bukela-2-Ndlela yokufowuna + SOS
I-3G yabantwana be-GPS Tracker Bukela-Uncedo olungxamisekileyo lwe-SOS
I-3G yabantwana be-GPS Tracker Bukela-iNdlela yeMbali
I-3G yabantwana be-GPS Tracker Bukela-Ikhamera
Udidi Product: I-2.0MP Ikhamera Yomntwana I-3G GPS Tracker Qaphela LBS + GPS + AGPS + WIFI Ukubeka i-Smart Kids Watch
Iphaneli ye-LCD yomboniso: I-1.54inch isikrini, i-240 * 240, i-2.5 ye-sapphire touch screen
Iifowuni zeFowuni I-Android kunye ne-IOS
Inethiwekhi: GSM / GPRS / GPS / WCDMA, Inkxaso yeWIFI
Chip Chip: I-MTK6572A ibini le-1.2GHZ, 256MB + 512MB
battery: 600mAh; ibhetri ehlaziyo
Ukuphindaphinda: I-GSM 850 / 900 / 1800 / 1900Mhz, iWCDMA 2100 / 900
GPS Ukuchaneka:5-15M (2D RM)
Ixesha elimisiweyo: 72H
Izinto eziphathekayo: I-silicone yebanga lokutya
Khanyisa 3G umnxeba
yokuqinisekisa: CTA, CCC, CE
3063 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-16 Namhlanje